Wuxuu naftiisa ku wayay si aan aniga iyo idinkuba xorriyad ugu noolaano! siyaasi cabdikariin axmed mooge.
Tuesday November 26, 2019 - 10:17:46 in News by Silfer Silver
Madaxda iminka soomaaliland ma yihiin kuwa Gudda amaalka qaranka loo galay?
Hargeysa(HWN):- siyaasi cabdikariin axmed mooge oo ka mid haldoorka dhalinyarada somaliland ayaa bartiisa facebook ku cambareeyay tacdiga xadhiga aan sharciga ahayn ee xukuumada madxweyne biixi ku samaynayso bulshada somaliland.
isago hadalkiisa si wata siyaasi cabdikariin ayaa xusay halyeeyo meel adag la soo maray xoriyada somaliland ku naloonaysa maanta alle ha u naxriiste maxamed mooge ayaa ka mid ah ragsi waxa u dhigna hadalka siyaasi cabdikariin axmed mooge sidan.
Wuxuu naftiisa ku wayay si aan aniga iyo idinkuba xorriyad ugu noolaano! Markuu xadhig iyo jeel saxiib la noqday ayuu xabad ugu badheedhay si uu u soo dhacsado xoriyadiisa aanu la'aanteen noolaan karayn!
Hadaad ka jawaabto waa maxay sababta Somaliland xoriyadeeda ula soo noqotay? Jawaabtu iyada oo kooban waa in xoriyad la helo oo lagu noolaado! Xoriyadaas cid inaga qaadi kartaa ma jirto hadaad rabto Ina-Sanweyna u geeyo!
In aan necebabay xadhig kasta oo siyaasadeed halkan ayay dabada ku haysaa wanan ka soo horjeeda in qof loo xidho aragtitiisa siyaasadeed.